स्वदेश आउँदा समाज सेवा - Parichaya.com
By परिचय	 On २५ आश्विन २०७८, सोमबार ०९:३२ 0
घनश्याम पौडेल, परिचय /
दुई बीस काटेकी सराङकोटकी साबित्री थापा बिहान घरको काम सकेर हतारहतार त्यहीँको स्थास्थ्यचौकी आएकी थिइन । आज ‘हेलपोस’ मा महिला जाँच्ने डाक्टर आउने रे भन्ने सुनेर उनलाई त्यहाँ आउन हतारो परेको हो ।
पोखरा महानगरपालिक १८ मा पर्ने सराङकोट पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा त निकै प्रख्यात छ । किनकी पोखराको समग्र दृश्यसँगै फेवाताल र उत्तरका माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण, धवलागिरी लगायतका हिमाल एकैको एकै दृष्टिले देख्न सकिने भएकाले नै यो ठाउँ पर्यटकीय गतिविधिले चिनिएको हो । तर पनि सवित्री जस्ता आफ्नो घरधन्दा र पुख्र्यौली पेसा कृषि गर्दै आएका महिलाका लागि पर्यटन कागलाई बेल पाके सरह हो ।
साबित्री जस्ता गाउँका गृहणीको स्वास्थ्य जाँच गर्न सहरका अस्पतालबाट ठूला डक्टर आएका छन् भने पछि सवित्री जस्ता धेरै उपस्थित महिलाहरू निकै खुसी देखिन्थे । त्यहाँ भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर तथा काठमाडौं र पोखराका क्यान्सर डाक्टरहरू महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर जाँच्न भनेर आएका थिए ।
कार्यक्रमको आयोजना गैर आवासीय नेपाली संघले गरेको थियो । जसलाई साथ गरिमा कडेंल मेमोरियल ट्रस्टले दिएको थियो । कास्की आर्दश समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नेपाल च्याप्टरले व्यवस्थापन गरिदियो । दसैंको बेला भएर होला वा एनआरएनको निर्वाचन समय भएर हो विश्वका विभिन्न ठाउँमा बसेका गैर आवासीय नेपालीका नेताहरूको चहलपहल थियो । विदेशबाट फर्केका नेपाली तथा स्थानीय गाउँलेको सघन उपस्थित रहेको थियो । ३१ वर्षदेखि रसिया बस्दै आएका एनआरएन उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी भन्दै थिए– हामी नेपालमा जन्मेका, हुर्केका नेपाली हौं, हाम्रो कर्मघर मात्र विदेश हो तर पनि जन्मथलोको माया औधी लागिरहन्छ त्यसैले हाम्रो तर्फबाट नेपाल र नेपालीलाई सेवा पुग्ने काम गरिरहेका हुन्छौं ।
गैर आवासीय संघकी उपाध्यक्ष रबिना थापा पनि विदेश बसेका हामीले आफ्नै गाउँमा आफ्नै दिदीबहिनी, आमाहरूको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउदै थिइन । हामीले देशमा परेको कुनै पनि सङ्कटमा जस्तै भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना जस्ता ठूला दःुखदेखि व्यक्तिगत रूपमा कुनै अशक्त वा आर्थिक अभावका दुखीलाई समेत मलम लगाउने कार्य गर्दै आएका छौं ।
नेपालीहरू आफ्नो रहर, बाध्यता वा परिस्थितिले देश छाडेर विदेश लाग्छन् । अहिले यसरी देश छाडेर विदेश लाग्नेको संख्या ६० लाख भन्दा बढी छ । लामो समय विदेशमा काम वा अध्ययन लागि अस्थायी बसोबास गर्ने वा स्थायी बसाई सर्नेहरूलाई कालान्तरमा आफ्नो देश, समाज र संस्कृति याद आइरहन्छ । आफ्ना लागि केही गरेपछि प्राय विदेश बसेका नेपालीको मन अब मेरो देश र समाजका लागि पनि केही सेवा योगदान गर्छु भन्ने भावना जाग्दछ । त्यसैको फलस्वरूप एनआरएन जस्ता संस्थाहरूको संरचना स्थापना भएको हो । आफनो स्थापनाकालका लक्ष्य र उदेश्य कति पूरा भए वा भएनन् त्यो अर्को पाटो हो तर पनि आफ्नो आयको केही भाग कटाएर नेपाल र नेपालीका लागि लगाउनु ठुलो कुरा हो । नेपाली संस्कृति, भाषा र संस्कारलाई जागृत राख्न विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि भेटघाट वा सरसहयोग गर्ने चौतारीको रूपमा यस्ता संस्थाहरू मौलाइरहेका छन् ।
नेपालमा वेरोजगारी समस्या, गरिवी र प्रयाप्त सेवा सुविधाको कमीले विदेश गएर युवा जोस जाँगर उतै सकेर, केही कमाएर, नेपाल फर्केका नेपाली पनि प्रसस्तै छन् । जसले अहिले आफ्नै देश र परिवारमा बसेर विदेशमा सिकेको सीप, सँगालेको पूँजी र अनुभवलाई देशमै प्रयोग गरेका छन् ।
घरदेश फर्केका नेपाली र अहिले पनि विदेशमा रहेका कास्की जिल्लावासी नेपालीको संस्था हो कास्की आदर्श समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद नेपाल । ४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको यस संस्थाको नारा नै ‘विश्वभरिका कस्केली खोजी अभियान,समृद्ध जन्मथलो हाम्रो स्वाभिमान’ रहेको छ । यसै संस्थाको हालै भएको पाँचांै स्थापना दिवस तथा तेस्रो महाअधिवेशनमा पनि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली प्रतिनिधि आएका थिए । विदेशमा बसी आप्mनो मेहनत, अनुभव र अध्ययनले पोखरा सजाउन वर्षांैदेखि लागी परेका निरज थापा, डा. सुन्दर पौडेल, गणेशराज पहारी, तिलकशाली सापकोटा, हरी ढकाल, विश्वबन्धु थापा जस्ता समाजका लागि केही गर्ने हुटहुटी पालेका पोखरेलीले यो पोखरालाई अझै सुन्दर बनाउने प्रयत्नमा छन् । पोखरा पर्यटकीय सहर मात्र हैन विदेश जाने पल्टनियाँ र गैरपल्टनियाँ लाहुरेको सहर पनि हो । यस्ता लाहुरेहरू विदेशमा रहेर होस वा स्वदेश फर्केर देश र समाजको लागि अगाडि बढे भने अर्थात् उता रहँदा आफूले सिकेको जानेको अनुभव सोचलाई यहाँ परिचालन गरेमा पक्कै हाम्रो ठाउँ पनि राम्रो बन्ने छ । देशले विदेशिने आफ्ना नागरिकलाई ‘ब्रेन ड्रेन हैन, ब्रेन गेन’ मान्दा मानव पूँजीको समुचित प्रयोग हुनु सक्छ ।